किन तपाइँ तपाइँको वेबसाइट Semalt बाट SSL प्रमाणपत्र को साथ सुरक्षा गर्नु पर्छ
सबै वेबसाइटहरूको सोच्दै तपाईं आफ्नो वेबसाइटको एसईओ मूल्य बढाउन सक्नुहुन्छ? जबकि हामी पक्का छौं तपाईंले सबै कम-फाँसीका फलहरू पहिले नै समातेको हुनुपर्दछ, त्यहाँ एक तत्व छ जुन प्रायः साइडरेट हुन्छ। र त्यो वेबसाइट डेटा ईन्क्रिप्शन हो।
अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको वेबसाइट मा एक SSL प्रमाणपत्र को स्थापना को स्थापना छ कि तपाइँको प्रयोगकर्ताहरु र तिनीहरुका डेटा को लागी एक सुरक्षित, ईन्क्रिप्टेड कनेक्शन को प्रमोट गर्छ। Semalt को साथ, तपाईं यो निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको वेबसाइटमा सबै संचार ईन्क्रिप्ट गरिएको र सुरक्षित छ। हाम्रो किफायती SSL प्रमाणपत्रहरू व्यापक रूपमा वेबसाइटहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन उनीहरूलाई अधिक सुरक्षित, Google-मैत्री, र लोकप्रिय बनाउँदछन्।
कडा एचटीटीपीएस ईन्क्रिप्शन हुनु एक राम्रो तरिका हुन सक्छ तपाइँको वेबसाइट को एसईओ स्तर खोज इंजन को आँखा मा एक नौंच उच्च ले। विशेष गरी यदि यदि तपाइँको वेबसाइटले भुक्तानी गर्छ (उदाहरण: शपिंग कार्ट)।
2020 र अधिक पछाडिको एसईओएलमा SSL किन एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो भन्नेमा गहिरो ध्यान दिनुहोस्।
हामी निर्दिष्टमा जानुभन्दा पहिले, यो बुझौं कि SSL प्रमाणपत्र के हो। यदि तपाईं वेबसाईटहरूमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, थप आधारभूत प्रश्न हुनेछ: वेबसाइट ईन्क्रिप्शन भनेको के हो? वा, HTTPS को मतलब के हो?
उत्तर सरल छ। एसएसएल, जुन सुरक्षित सॉकेट लेयरको अर्थ हो, एक इन्टरनेट सुरक्षा प्रोटोकल हो जसले आधुनिक वेबसाइटहरूमा डाटा ईन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण, र डेटा अखण्डताका लागि अनुमति दिन्छ। यसले नियमित हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल (HTTP) लाई एक सुरक्षित (HTTPS) मा रूपान्तरण गर्दछ, तपाईंको डाटालाई सुरक्षा र तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वसनीयता दिँदै। तपाइँको वेबसाइट को सर्वर को माध्यम बाट जान्छ कि कुनै पनि जानकारी को एन्क्रिप्टेड छ कि यो चोरी वा प्रसारणको बखत छेड़छाड गर्न सकिदैन।
एसएसएल एक वेबसाइटमा प्रमाणपत्रको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ (जुन कोडहरूको संयोजन हो) Semalt जस्ता प्रदायक द्वारा उत्पन्न। यस SSL प्रमाणपत्र सबै डेटा गुप्तिकरण गर्दछ जुन तपाइँको वेबसाइटको भित्र र बाहिर जान्छ। यसले मुख्य रूपमा तीन कार्यहरू गर्दछ:
सबै डाटा ईन्क्रिप्ट गर्दै
उपकरणहरू (तपाईंको कम्प्युटर र सर्भर) बीच एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू गर्दै यी उपकरणहरू उनीहरूले दावी गरेको दावी गर्छन् भनेर पुष्टि गर्न।
डिजिटल रूपमा दुबै छेउमा राम्रो पहिचानको लागि डाटा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
अनलाइन सुरक्षामा, SSL का लागि प्राविधिक पद TLS हो, जुन यातायात तह सुरक्षाको लागि खडा हुन्छ। यो मूल SSL 3.0.० प्रोटोकलको उत्तराधिकारी हो जुन १ 1996 1996 in मा सुरू गरिएको थियो। आज, यो SSL / TSL ईन्क्रिप्शनको रूपमा परिचित छ। गुगलले यसलाई HTL लाई TLS वा HTTPS मा बोलाउन मनपर्दछ।
उदाहरण को लागी, जब एक प्रयोगकर्ता तपाइँको वेबसाइट को भ्रमण र चेकआउट पृष्ठ मा आफ्नो क्रेडिट कार्ड जानकारी प्रवेश, त्यो डेटा आदर्श ईन्क्रिप्टेड हुनु पर्छ। एक SSL प्रमाणपत्रको साथ, तपाइँ यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि यो छ। यसले तपाईंको प्रयोगकर्ताको आलोचनात्मक व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित गर्दछ साथै तपाईंको वेबसाइटलाई विश्वासनीयको रूपमा सुरक्षित गर्दछ। तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई पछाडि आउँनुहोस् र पछि फेरि व्यवहार गर्नुहोस्।
यो SSL प्रमाणपत्र गुगल क्रोम र मोजिला फायरफक्समा युआरएलको सुरूमा हरियो लक प्रतीक प्रदान गर्ने कुरा हो। हाम्रो स्थापना भएदेखि, Semalt ले विश्वभरि सयौं ग्राहकहरूको सेवा गरेको छ। हाम्रो ग्राहकहरु सबै हामी प्रदान गर्छौं कि तीन SSL प्रमाणपत्र योजनाहरु मा एक मा निर्भर गर्दछ। प्रीमियम प्याकेज (जसले सबडोमेनलाई पनि समर्थन गर्दछ) स्वाभाविक रूपमा SSL / TSL प्रमाणपत्र प्रस्तावहरूको बीचमा सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता हो।
यसले हामीलाई मद्दत पुर्‍याउँछ कि Semalt कार्मिकहरूले धेरै भाषाहरू जान्न सक्छन् जस्तै अंग्रेजी, फ्रेन्च, रूसी, यूक्रेनी, इटालियन, टर्की। यसले उत्तम संचारमा सहयोग पुर्‍याउँछ र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तम सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
चित्र १ - गुगल क्रोममा सुरक्षित प्रतीक
अब जब तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट र तपाइँको वेब आगन्तुकहरूको लागि एन्क्रिप्शनले के गर्न सक्दछ भन्ने बारे राम्रो विचार छ, अब हामी SEO कोणबाट यसलाई हेरौं।
किन एक SSL प्रमाणपत्र तपाइँको वेबसाइट को SEO को लागी महत्वपूर्ण छ?
Semalt मा, एक प्रीमियम SEO सेवा प्रदायक र एक समग्र डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी हुनु, हामी सुरक्षा उत्पादनहरु को लागी उच्च सम्मान छ। हाम्रो SSL प्रमाणपत्र प्रस्ताव ती मध्ये एक हो, जुन तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटको एसईओ बढाउन मद्दत गर्दछ।
हामीले पहिले नै सिक्यौं कि कसरी तपाईंको वेबसाइटमा SSL / TSL प्रमाणपत्रको उपस्थिति तपाईंको लागि वरदान हुन सक्छ। यसले सुरक्षित वेबसाइटको रूपमा तपाइँको वेबसाइटको सुरक्षा मात्र गर्दैन तर तपाइँको प्रयोगकर्ताहरूको जानकारीलाई बचाउनेछ। तर त्यस भन्दा बढि यसले तपाईको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) प्रयासमा मद्दत गर्दछ। कसरी पत्ता लगाऔं।
गुगल प्रोत्साहित HTTPS
२०१ 2014 मा, Google ले घोषणा गर्‍यो कि यसले 'सुरक्षित, ईन्क्रिप्टेड जडानहरूलाई यसको खोज रैंकिंग एल्गोरिदममा संकेतको रूपमा विचार गर्न थाल्छ।' त्यसदेखि six बर्षमा, गुगलले यसको तौललाई एसएसएल / टीएसएल ईन्क्रिप्शनमा यती बढाएको छ कि आज यसले प्रायः खोज प्रश्नहरू, र विशेष गरि वित्तीय लेनदेनमा झुकावहरूलाई असर गर्दछ। ईकॉमर्स साइटहरू, भुक्तानी गेटवेहरू, र सामाजिक नेटवर्कहरू वेबसाइट प्रकारका उदाहरण हुन् जुन ईन्क्रिप्शनको आवश्यक पर्दछ। किनभने तिनीहरू प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी जस्तै क्रेडिट कार्ड विवरणहरू, सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू, र व्यक्तिगत पहिचान विवरणहरूसँग सम्झौता गर्छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं आफ्नै ड्रपशिपिंग व्यवसाय छ भने, SSL तपाईंको एसईओ चेकलिस्टको शीर्षमा हुनुपर्छ।
अन्य खोज इञ्जिनहरू जस्तै बिंग र यान्डेक्स पनि वेबसाइट ईन्क्रिप्शन राम्रो स्ट्यान्डि signalको मानक संकेतको रूपमा प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ।
गुगलको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टका अनुसार अप्रिल २०२० मा गुगल क्रोममा लोड गरिएको p 88% वेबपृष्ठहरू (विन्डोज डेस्कटप मार्फत) HTTPS सँग ईन्क्रिप्ट गरिएको थियो। त्यो विशाल संख्या हो किनकि क्रोमसँग अझै पनि वेब ब्राउजरहरू बीच सब भन्दा बढी (र अधिकतम) बजार साझेदारी छ।
चित्र २ - क्रोममा HTTPS माथि लोड पृष्ठहरूको प्रतिशत
उही रिपोर्ट सुझाव गर्दछ कि मोबाइल उपकरणहरूले बहुमत ईनक्रिप्टेड प्रयोगकर्ता यातायात को लागी खाता। यसले देखाउँदछ कि हाम्रो वरिपरिका वेबसाइटहरूको लागि सुधारको लागि पर्याप्त ठाउँ छ। के तिमि ती मध्ये एक हो?
त्यस सन्दर्भमा, यहाँ गुगलबाट केहि सूचकहरू छन् किन HTTPS महत्त्वपूर्ण छ:
इभिड्रुपर्स र अपहरणकारीहरूको बिरूद्ध सुरक्षा गर्दछ
साइबर आक्रमणहरू रोक्नुहोस्
डाटा अखण्डता सुधार गर्दछ
सफ्टवेयर र हार्डवेयर सुरक्षा पर्याप्त नहुन पनि एक एकल सुरक्षा प्रणाली को रूप मा कार्य गर्दछ
SSL / TSL ईन्क्रिप्शनको साथ एक वेबसाइट खोज ईन्जिनहरू संकेत गर्दछ कि यसले प्रयोगकर्ता जानकारी र डाटा अखण्डता गम्भीरताका साथ लिन्छ। अन्य कारकहरू जस्तै प्रासंगिक सामग्री, सामग्री साइलो, मजबूत आन्तरिक लि ,्क, र उच्च-प्राधिकरण ब्याकलिंक्सको साथ, एन्क्रिप्शन पनि एसईओ सुधारको लागि महत्वपूर्ण कारकको रूपमा देखा पर्‍यो।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, एसईओ जैविक खोजीमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता सुधार गर्ने बारेमा हो। महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा ईन्क्रिप्शनको साथ, तपाईं केवल सानो शुल्कको लागि SSL प्रमाणपत्र स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ अनइनक्रिप्टेड, गैर- HTTPS वेबसाइटहरूको भीडबाट बाहिर खडा हुन सक्नुहुन्छ।
HTTPS कसरी एसईओ सुधार गर्न सक्दछ?
यदि तपाईं इन्टरनेट मार्केटर हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पहिल्यै थाहा छ कि कुनै कार्यले SEO मा तत्काल प्रभाव पार्दैन। तपाइँ तपाइँको सबै वेबसाइट सामग्री अनुकूलन गर्न र प्रत्येक पृष्ठ एक निश्चित सान्दर्भिक कुञ्जीमा नक्शा गर्न सक्नुहुन्छ। र खोज ईन्जिनहरूले अझै समय पुन: अनुक्रमणिका, क्याच, र तपाईंको वेब पृष्ठहरू विचार गर्न राम्रो लिs्कको लागि लिन्छन्।
यो ज्ञात छ कि कुनै पनि जादुई तरिकाले तपाईको SEO रैंकिंगलाई रातारात बढाउन सक्दैन। तपाइँको वेबसाइटमा एचटीटीपीएस सक्रिय गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। तपाईले आफ्नो वेबसाईटमा जैविक खोज इञ्जिन पृष्ठ नतीजा (SERP) मा अझ राम्रो SSL / TSL प्रमाणपत्र स्थापना गरेर राम्रो स्थिति पाउन अपेक्षा गर्नु हुँदैन। जब तपाइँको धेरै कार्यहरू एक अवधिको अवधिमा सँगै आउँदछन्, तपाइँ तिनीहरूको लाभहरू काट्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
फिगर - - यो कसरी गैर-एचटीटीपीएस वेबसाईटले प्रयोगकर्तालाई हेर्छ
एउटा स्पष्ट उदाहरण जसले तपाईंलाई स्पष्ट चित्र प्रदान गर्दछ त्यो यो हो: Semalt को TSL इन्क्रिप्टेड वेबसाइट र अर्को प्रतिस्पर्धी एजेन्सीको एक गैर-एन्क्रिप्टेड वेबसाइटलाई विचार गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सान्दर्भिक डिजिटल मार्केटिंग शीर्षक खोज्दै हुनुहुन्छ, र यी दुई वेबसाइटहरू शीर्ष स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, Semalt को साइट उच्च श्रेणीकरण गर्नेछ। किन?
किनकि Semalt सँग न केवल राम्रो, त्यस विषयको बारे प्रासंगिक सामग्री तपाईंले खोजी गरिरहनु भएको छ तर SSL प्रमाणपत्र स्थापना भएको छ। एक तरीकाले, यो चीजहरू मध्ये एउटा मात्र हो जुन खोज ईन्जिनले क्वेरीको लागि बिभिन्न परिणामहरू तुलना गर्न प्रयोग गर्दछ।
यदि तपाईं कार्बनिक खोजीको शीर्षमा तपाईंको वेबसाइटलाई पुशिंगमा सबै स्टपहरू तान्न चाहनुहुन्छ भने, SSL / TSL प्रमाणपत्र स्थापना गर्न सजिलो कार्यहरू मध्ये एक हो। तपाइँको आवश्यकताको आधारमा तपाइँले प्रमाणपत्र खरीद गर्नको लागि यसले लिने सबै मात्र हो, र तपाइँ जानु राम्रो छ।
Semalt को साथ SSL प्रमाणपत्र कसरी स्थापना गर्ने?
Semalt को साथ, तपाइँको वेबसाइट मा एक SSL प्रमाणपत्र स्थापना अनलाइन शपिंग को रूप मा सजिलो छ। तपाईं हाम्रो SSL प्रमाणपत्र पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ र तीन योजनाहरू मध्ये एकबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरु:
आधारभूत - केवल स्थापना, कुनै प्रमाणपत्र छैन
मानक - कोमोडो प्लस स्थापनाबाट सकारात्मक SSL
प्रीमियम - सबडोमेन र स्थापनाको लागि समर्थन सहित उत्तम-बेच्ने सकारात्मक सकारात्मक SSL वाईल्डकार्ड
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, हाम्रो प्रीमियम योजना हाम्रा अवस्थित ग्राहकहरू माझ लोकप्रिय छ। यसले उनीहरूलाई समस्याबाट मुक्त सेटअप प्रदान गर्दछ ताकि उनीहरू वेब सामग्री र प्रयोगकर्ता प्रबन्धन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन्।
एक पटक तपाईंले उपयुक्त योजना छनौट गर्नुभयो, सुरक्षित र सुरक्षित भुक्तानी गेटवे मार्फत खरीद गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो खरीद गर्नुभयो, तपाईं सजिलैसँग हाम्रो वेबसाइटको साथ हाम्रो वेबसाइट एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइटलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यदि सेटअप चरणको अवधिमा तपाईंले कुनै समस्याहरूको सामना गर्नुभयो भने, हाम्रो ग्राहक सेवाले तपाईंलाई मार्गनिर्देशन र तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ।
Semalt को SSL / TSL प्रमाणपत्रले तपाइँलाई तपाइँको डिजिटल मार्केटिंग यात्रामा पाँच मुख्य चीजहरू प्रदान गर्न सक्छ। उनीहरु:
तपाइँको वेबसाइट को उच्च सुरक्षा
गुगल क्रोम र अन्य वेब ब्राउजरहरूमा तत्काल हरियो सुरक्षित प्रतीक
तपाइँको वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूको लागि गोपनीयता सुरक्षा
खोजी इन्जिनहरूबाट जैविक वेब आगन्तुकहरूको उच्च मात्रा
हाम्रा धेरै विगत र अवस्थित ग्राहकहरु द्वारा उल्लेख गरिएको अनुसार , SSL प्रमाणपत्र स्थापनाले तपाईको वेबसाइटलाई निजी पोर्टलमा बदल्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन तपाईका प्रयोगकर्ताहरूले विश्वास गर्न र नियमित रूपमा डील गर्न सक्दछन्।
गुगल क्रोममा 'सुरक्षित छैन' प्रतीक हेरेपछि सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको वेबसाइटबाट फर्काउन नदिनुहोस्। Semalt SSL प्रमाणपत्रको साथ तिनीहरूलाई ल्याउनुहोस्। यहाँ एक खरीद गर्न को लागी क्लिक गर्नुहोस् ।